Paprika pod (na ny maina Paprika manontolo) ampiasaina amin'ny alalan'ny Air maina dia tokony ho 10cm ny lavany, loko mena misy mifaritra, faran'izay ambany dia ambany misture ary azo tehirizina nandritra ny fotoana ela. Paprika pods dia azo tsinjaraina ho vovoka avy eo reprocessed ny saosy na hafa karazana. Izy ireo azo ampiasaina amin'ny akoho, ny pizza, hena, paty, salady, legioma, ovy salady, atody sy ny steak.
Product Name Maina manontolo Paprika ,Paprika Pods
Type Amin'ny SAMPA na stemless
fikarakarana Type Air maina
Place ny Origin Xinjiang, Sina
Supply-potoana Taona rehetra manodidina
Supply Capability 20000 MT / Taona
talantalana Life 18 volana
Quality No Speckle, Tsy misy bobongolo, No Sodàna Red
Fonosana 20 na 25kg / voatenona kitapo, na araka ny mpanjifa 'fepetra
Fanamarihana: Ny fanazavana amin'ny endrika fotsiny noho ny boky. Raha liana amin'ny vokatra, masìna ianao, avelao ny hafatra ao amin'ny "Contact Us". Izay ny fanontaniana avy hatrany dia hahazo ny valin-.
Previous: Chili Pods
High Quality nifoka Paprika
Huapi Paprika Miaraka Stemless
faharoa Quality Fa Paprika